Fahaiza-mamorona atosiky ny fitiavana
Nandefa horonan-tsary, hafatra ho an'ny mpino ny papa François amin'izao fankalazana ny Herinandro masina izao. Manentana ny tsirairay ny Ray masina mba hahay hanararaotra izao vanim-potoana mihavaka izao. Mila ny "fahaiza-mamorona atosiky ny fitiavana" isika, hoy ny papa, mba handrosoana lavitra kokoa. Araho ny horon-tsary miaraka amin'ny dikan-teny malagasy.
"Hay kay ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika ity, dia arakaraka izay manendrika antsika. Ny voloko kosa ve izao dia hitovy amin'ny volon'i Rossy, izaho efa sola."